Robotrading ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka Trading - Blockchain News
Robotrading ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka Trading
Robotrading bụ usoro nke na-eji a set nke ntuziaka maka ịtụkwasị ọnụ ekwegasịrị ịzụta ma ọ bụ na-ere shares, ego, ma ọ bụ cryptocurrency. The ntụziaka set dabeere dị iche iche ahịa egosi, tinyere price, oge, olu, na ndị ọzọ. Mgbe ahịa na-na-ike gwụrụ na-adịghị enwe oge ahia aka, ha na-eche banyere na-akpụ akpụ robotrading. Ma ọnụ ụzọ ịbanye ebe a bụ ezi elu, karịsịa maka a onye nwere pụrụ iche adịghị ego ma ọ bụ oru mmuta.
About ntughari ka robotrading na free oge
Ọ bụrụ na onwe ọṅụ na-elekwasị anya uru, na-aghọta ihe dị iche n'etiti ntuziaka na na akpaghị aka trading, na nwere ụfọdụ mmemme nkà, ha kwesịrị dịkarịa ala na-eche banyere ịmafe akpaka rails. Irè na akporo ọrụ na-amụba: ndị mmadụ dị nnọọ eme ihe na mma. Site trading na-akpaghị aka, ị pụrụ ịgụcha ọzọ mgbanwe, eji ihe ngwaọrụ na azum. Ma, ọ pụtaghị na ị na-adịghị mkpa iji nyochaa akpaka arụmọrụ dị ka akwụkwọ ntuziaka ndị. Echefula banyere nlekota oru, ọ bụ mgbe mkpa ịnọgide na anya unu oghe.
ọ bụla ahia, ma ntuziaka ma ọ bụ algorithmic, -achọ mgbalị na full itinye aka na usoro. Ọ bụrụ na ị chọrọ irite, ị na-eji a ọtụtụ oge na trading. kwesịrị, ị kwesịrị ị nwere a full arụ ọrụ ụbọchị, mgbe ị na-apụghị nnọọ dee koodu na-aga zuru ike. N'ezie, ị ga-mmasị dị nnọọ n'otu ebe, ị ga-enwe ike ịga na gburugburu ụwa ma ọ bụ nanị ma ọ bụrụ na unu na-online. Ma, ọ bụ maa bụghị ụgha na a hammoku n'okpuru a nkwụ maka ụbọchị.
About fiat ego na cryptocurrency
Na mmemme okwu, na e nweghị ihe dị iche n'etiti ihe ị na-trading, fiat ego ma ọ bụ cryptocurrency. Ndị isi ihe bụ ike a mma ụgbọ trading usoro. E nwere algọridim na ike ga-eji ihe n'ụzọ dị irè ma na ot ego, cryptocurrencies, ma ọ bụ ngwaahịa shares. Ọ bụghị dị mkpa ihe na ngwá ọrụ na-etinyere maka ntinye. Gịnị ka okwu ahụ bụ ma ma ọ bụ ndị na-achịkwa echiche na algọridim na-akọwa omume nke kpọmkwem họrọ ngwá ọrụ. Ya mere ebe a bụ ajụjụ nke mbụ ahia echiche Nwa na atụmatụ. Otu ọ dịla, mgbe ihe algọridim na-emepe emepe, omume nke a akpan akpan trading akpan owo na-sonye na akaụntụ.
About uru, ize ndụ na ihe nzuzu
Onye kasị ukwuu uru nke akpaghị aka trading n'elu ntuziaka trading bụ a enweghị mmetụta uche. Ndị mmadụ na-eme mkpebi ndị dabeere na mmetụta na mmetụta uche na ọ bụghị mgbe niile nwere nti utịp ke pụta, karịsịa na oké egwu oge. Na ntule ndịiche, algọridim nanị rụrụ ya ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla mmetụta uche ma ọ bụ obi ụtọ; ọ dịghị ewe ihe n'echeghị echiche mkpebi na hapụrụ on nditịm kpọmkwem atụmatụ. Ma ọ bụrụ na algọridim na-malitere, na ahia nwere ike adịghị etinye aka na-agbanwe ihe.
N'ezie, e nwere ihe ize ndụ, na ha na-enwekarị ahịa ize ndụ. The algọridim trading echiche nwere ike ịkwụsị ịkpata ụfọdụ ebe mgbe ọ bụla na-ejighị n'aka ihe na ọdụdọ erukwa na ahịa. Kasị robots ike Chọpụta mgbaàmà. Ị ga-soro ndị a na-agbanwe gị ígwè ọrụ na-na oge ma ọ bụ gbanyụọ ha. E nwekwara a obere ihe ize ndụ na mgbanwe ga ada ị.
Ọzọkwa, programmers nwere ike mgbe ụfọdụ ka enweghị isi ma mmehie. A mfe algọridim nwere ndị na-eri na price. N'ezie, iji mee ka ego, gị price kwesịrị elu karịa gị na-eri. Ọ bụrụ na ị na-emegharị ha, gị robot ga-abaghị uru. Ọtụtụ mgbe Newbies ihu nsogbu a. N'ihi ya, a nnọọ mfe ndudue mgbe ọ bụla ogbo na-eduga ná nnukwu losses.
Ọ bụla kpọmkwem nkà ga-abụ nnọọ uru. Site n'ikwu ọ bụla kpọmkwem nkà, isi pụtara ezi ihe ọmụma nke mgbakọ na mwepụ na mgbagha. Ọ bụ ihe ndị ọzọ banyere echiche doro anya na nghọta nke otú dee a iwu trading na-achị kama banyere mgbakọ na mwepụ n'ihi na ị na-adịghị mkpa ọ bụla algebraic mgbanwe na mmalite nkebi. E nwere a doro anya dị iche n'etiti mmetụta nke otú ahia na ike na-akọwa na ahia arụmụka a iwu set nke ihe na omume. Mgbe a na nzọụkwụ, anyị mkpa mgbakọ na mwepụ ihe ọmụma. Ọzọkwa, mmemme nkà na iwu nke isi omume asụsụ (ọmụmaatụ, “na C”) ndị dị oké mkpa.
Mgbe ụfọdụ, o yiri ka unu abịa na a bara uru atụmatụ, pụtara na-arụ ọrụ trading echiche. Ị itu ya na ihe ọ bụla mgbakọ na mwepụ ịme ngosi uwe mmemme, dị ka ọmụmaatụ, Mathcad. mgbe, na ị na-data, chepụta a data nlereanya, na-eme ka achọrọ calculations. Mgbe nke ahụ mechara, ị na-agụnye niile Ụlọrụ na surcharges, na ihe niile na-arụ ọrụ ezi. N'agbanyeghị, ọlị, emela nwa ewu onwe gị, agụnye niile ịkwụ ụgwọ, ọ dị mkpa. Ma mgbe ahụ, ị ​​na-aghọta na oru mmejuputa iwu gị echiche kwesịrị ego karịa i nwere ike irite a echiche.
O ruru otu mgbe, otu onwe ọṅụ mere a ebube trading robot, aha ya bụ panda. Ọ eme ihe 8,000% laghachi n'elu N'ezie nke ọnwa atọ na fọrọ nke nta ka ọ dịghị mbụ n'ihe ize ndụ. Panda e-atụle na hyped a ọtụtụ, ma ya n'ezie na-arụ ọrụ nke ọma. Ma ihe bụ na robot mere ka nke a ego si mbụ isi obodo na 1 puku, mgbe ọnwa support maka dum technical akụrụngwa chọrọ ịkwagide oru ngo na-eri na gburugburu a 10 puku. N'ihi ya, ọ bụ mmalite ihe na-abaghị uru na oru ngo, n'ihi na ọ nwere ike na-adịghị ọbụna-ekpuchi ihe niile na-akwụ ụgwọ maka na ọkụ eletrik, ike sava na kọmputa arụ mgbawa maka oru ngo Karịsịa, onye kwesịrị icheta na robot enwetakwa-bụghị mgbe niile elu, ma ego mmezi bụ ga-akwụ ụgwọ iji nwayọọ nwayọọ na. Ya mere, ọ dị mkpa ka gbakọọ bụghị nanị otú irite, ma otú ihe ị na-eji iji irite.
About ngwa ngwa ego
O doro anya na ígwè ọrụ nwere ike ahazi dị iche iche, ọ na-adabere na olu nke ahia, ihe leverages na mgbazinye ego na-eji mgbe trading, ma ị na-etinye ego ego na gị onwe gị ma ọ bụ na mmadụ n'ihi, etc. E nwere ọtụtụ nke nuances. Edi ke ofụri ofụri, i nwere ike irite nta nke nta kwa afọ na ọ fọrọ nke nta dịghị ize ndụ site erekwa ruo afọ iri na 10% kwa afọ, ma ọ bụ i nwere ike na-agbalị ahia otu afọ na 100%.
Ma, e nwere a iwu na ngwaahịa ahịa na ị ga-enwe ike na-aghọ aghụghọ - elu nwere laghachi, ka ukwuu nwere ihe ize ndụ. Ọ bụ siri ike dị ka ọchịchị nke ọkọnọ na ina. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị gụọ na nnukwu ego, -adị njikere maka nnukwu losses. A na-achị apụghị izere na a ga-sonye na akaụntụ mgbe ọ na-abịa ka ha laghachi na ulo oru mbo (ROI) ma ọ bụ algorithmic trading profitability.
About nyiwe maka Newbies
E nwere ụfọdụ ndị nyiwe na-ekwe ka onye ọ bụla na ahia enweghị nkà nke Trading. Ọmụmaatụ, Libertex bụ ndị kasị ama n'elu ikpo okwu, ma e nwere ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ a mma nhọrọ maka a newbie na-agbalị na-ahụ otú ọ niile ọrụ.
Top 8 Best Mobile Ngwa maka Cryptoсurrency
South Korea si Financ ...
Next Post:Ịkwụ Ụgwọ ọrụ straipu jụ Bitcoin